जहाज उडाउन छोडेर निगका दुई क्याप्टेन आन्दोलनमा, क्याप्टेनको दादागिरीका कारण उडान तालिका तहसनहस । - Nepali Online News Media-shikharnews.com
जहाज उडाउन छोडेर निगका दुई क्याप्टेन आन्दोलनमा, क्याप्टेनको दादागिरीका कारण उडान तालिका तहसनहस ।
२०७५ माघ २० आइतवार
काठमाडौं। अब्यवस्था र चरम भ्रष्टाचारको नमूना बनिरहेको नेपाल वायु सेवा निगम। राष्ट्रिय ध्वजा वाहक संस्था भए पनि यसले ठूलठूला काण्डै काण्डको इतिहास बोकेको छ र घाटाको व्यापार गरिरहेको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण वाइडबडी घोटाला । तर, ६ अर्ब ५९ अर्ब भन्दा बढी घोटाला भएको वाइडबडी बारे चर्चा गर्ने छैनौं। निगमभित्र कतिसम्म अराजकता छ र गैरजिम्मेवारी छ भन्ने उदाहरण। हो, केही व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण निगमको आन्तरिक तर्फको उडान अन्यौलपूर्ण मात्रै बनेको छैन, यसले निगमप्रतिको धर्मराएको विश्वासमा थप मलजल गरेको छ र अनियमिततासँगै अराजकता पनि छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्बमा खरिद गरेर ल्याएको दुई वटा वाइडबडी जहाज र त्यसमा भएको ६ अर्ब ५९ करोडको घोटाला। उक्त घोटालामा मुख्य रुपमा संलग्न भएकाहरु निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालगायत ३८ जनालाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको एक महिना बित्नै लाग्दा कुनै एक व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । बरु घोटालामा वाहलवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सोही मन्त्रालयका पूर्व सचिव र मन्त्रीहरु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा शीर्ष नेताहरुकै संलग्नताको आशंका देखिएपछि जसरी भएपनि घटना गुपचुप नाउन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी समेत लागेको छ। यो त भयो वाइडबडी जहाजका कुरा।
यो घोटालासँगै हामीले वारम्वार उठाएको अर्को विषय हो निगम भित्रको अब्यवस्था। जुन अब्यवस्थाका धेरै उदाहरण मध्ये एक हो आन्तरिकतर्फका विमानमा भएको झमेला। जुन झमेलाका कारण निगमसँग भएका १४ वटा जहाज मध्ये अधिकांश ग्राउन्डेड गराउने खेल सुरु भएको छ। निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि तोकिएका थ्ज्ञद्दभ् ढल् ब्प्क् (वाई १२ ई ९ एन एकेएस) , ढल् ब्प्त् (९एन एकेटी), ढल् ब्प्ग् (९एन एकेक्यू), ढल् ब्प्ख् (९एन एकेभी) छन् । जस मध्ये ढल् ब्प्क् जहाज ग्राउण्डेड छन्।
त्यसैगरी, ः(एमए ६०) तर्फ (९एन एकेक्यू) र (९एन एकेआर) जहाज यति बेला मर्मतमा छन्। टिवनअटर तर्फ (९एन एबिएक्स), (९एन एबिक्यू) र (९एन एबिटी) रहेका छन् । जस मध्ये 9N ABX जहाज ग्राउण्डेड छन्।
साना र मझौला गरी ९ वटा जहाज छन् यति बेला निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि ।
यी ९ वटा जहाजमा निगमसँग रहेका क्याप्टेनहरुको नामावलि हेर्नुहोस्।
तीन वटा ट्विनअटर जहाजमा ः
वाइ १२ ईका दुई जहाजका लागि ः
र एम ए ६० का दुई जहाजका लागि ः
गोपाल सिंह विष्ट
र, राजेन्द्रमान साक्य ।
यसरी, हेर्ने हो भने निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि रहेका ९ वटा जहाजका लागि १३ जना क्याप्टेनहरु छन्। तर पनि किन निगमका जहाजहरु उड्दैनन?
निगमले काठमाडौंबाट ६ वटा मुलुकका ८ वटा सहरमा ५ वटा विमानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छ । दुई वटा वाइडबडी र एउटा न्यारोबडी विमानबाट ५ वटा सेक्टरमा उडान हुने तालिका छ। तर, पनि केही व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण निगमको आन्तरिक उडान धरासायी बन्दै छन्।
चरम घोटालाका कारण चर्चामा रहेको संस्था नेपाल वायु सेवा निगम। तर, निगमभित्र घोटाला मात्रै छैन अराजकता पनि छै, अब्यवस्था पनि छ। यति सम्म कि जसले जे गरे पनि छुट छ। ब्यवस्थापकले ब्यवस्थापन नगर्ने मात्रै होइन, पाइलटले विमान नउडाउने छुट समेत छ निगममा। अवस्था यस्तो सम्म छ कि, विमानमा चढेर उड्न ठिक्क परेका यात्रुले पनि उड्न पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कारण विमान उँडानुपर्ने क्याप्टेनहरु नै बढुवाको माग गर्दै उडान गरिरहेका छैनन्।
नेपाल वायुसेवा निगमसँग यति बेला अन्तरिक तर्फ ९ वटा जहाजहरु छन् । तर, केही क्याप्टेनहरुको गैर जिम्मेवार हर्कतका कारण जहाज सेवा दिन नसकेर ग्राउन्डेड छन्। अन्तर्राष्ट्रियतर्फक एक र आन्तरिकतर्फको ७ वटा जहाज अहिले ग्राउण्डेड भएका हुन् । जसले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक हवाई सेवा प्रभावित भएको छ। सँगसँगै वित्तीय संकटमा फसेको निगमलाई ठूलो धक्का लागेको छ । यसले निगमलाई करोडौं घाटामा छन् एकातिर भने अर्कोतर्फ दुई जना क्याप्टेनका गैर जिम्मेवारीका कारण आन्तरिकतर्फका सबै उडान नै तहसनहस बनेको निगमकै कर्मचारीको दावी छ। उनीहरु हुन्, वाई १२ ई जहाजका क्याप्टेनद्वय संजय बादे श्रेष्ठ र नृपेन्द्र भट्टराई।
यी दुई क्याप्टेन श्रेष्ठ र भट्टराईले वाई १२ ई जहाजबाट वाइडबडी जहाजमा जान नपाएपछि जहाज उडाउनै बन्द गरेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको अपरेशन डिपार्टमेन्टको लग बुक एक पटक हेर्नुहोस्। क्याप्टेनद्वय श्रेष्ठ र भट्टराईले भोलिदेखि आफूहरु विमान उडाउनका लागि आउने भनेर उल्लेख गरेका छन्। तर जब भोलिपल्ट विमान उड्न बेला हुन्छ त्यसपछि दुवै जनाले आफुहरु बिरामी भएको जानकारी गराउँछन् । एक पटक यो हेरौं।
यो कुनै एक वा दुई दिनको कुरा होइन । क्याप्टेनद्वय श्रेष्ठ र भट्टराईले पछिल्लो केही सातादेखि यस्तै हर्कत गर्दै आएका छन्। र, त्यसको मारमा यात्रुहरु परेका छन्। उनीहरु बिमान भोलि पल्ट बिमान उडाउने कुरा गरेपछि निगमले त्यही अनुसार टिकट पनि काटेको थियो । र यात्रुहरु पनि विमानस्थल पुगेका थिए, तर जहाजमा बसिसकेका यात्रुहरु अन्तिम अवस्थामा आएर अलपत्र परे । कारण, वाई १२ ई का क्याप्टेनद्वय श्रेष्ठ र भट्टराई आउँदै आएनन्। यसरी उडान रद्द गर्नु पर्दा कस्तो परिरहेको छ निगमको छाप तपाइँ आफैं विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
क्याप्टेन नृपेन्द्र भट्टराई २०१४ अगष्ट २९ मा नेपाल वायुसेवा निगममा आएका हुन् ।
उनी आउँदै गर्दा निगमको स्टोल एयरक्राफ्टमा जागिरका लागि आएका व्यक्ति हुन्। र यो उनको नियुक्ति पत्र हेर्नुहोस्।
स्टोल क्याप्टेन भनेकै दुर्गम र सानो रुटमा उडाउने क्याप्टेन हो। निगममा जागिर खान आउदा एउटा कामका लागि सम्झौता गरेर आउने र अहिले आएर वाइडबडीमा जान्छु भनेर आन्तरिक तर्फको विमानै नउडाउने?
त्यस्तै अर्का क्याप्टेन संजय बादे श्रेष्ठको प्रोफाइल हेर्नुहोस्। उनी निगममा २०१४ मार्च ३१ मा आबद्ध भएका हुन्।
र, त्यस्तै यो अर्को व्यक्ति हुन् नागेन्द्र भट्टराई। उनी पनि वाइडबडी जहाजको क्याप्टेन बन्नु पर्छ भन्ने माग गर्दै वाई १२ ई जहाज उडाइरहेका छैनन्। उनी पनि स्टोल क्याप्टेनमा निगमा २०१४ अगष्ट २८ मा भित्रिए । तर उनी निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई प्रभावमा पारेर एयर बसमा प्रवेश पाए। आखिर स्टोल क्याप्टेनमा नियुक्ति पाएका व्यक्ति कसरी एयर बसमा क्याप्टेन भए? यसलाई नै आधार बनाएर क्याप्टेनद्वय श्रेष्ठ र भट्टराई आफूहरु पनि वाइडबडी जहाजको क्याप्टेन हुने पर्छ भनेर माग गर्दै जहाज हड्तालमा उत्रिएका छन्। तर बसिसकेको बेथिति अन्त्य गर्न त्यति सहज छैन।
हो, केही विमान चालक वाइडबडी जहाजको क्याप्टेन हुनुपर्छ भनेर म हड्तालमा उत्रिएका छन्। उनीहरुको अचाक्ली भएपछि र विकल्प पनि नभएपछि निगम ब्यवस्थापन पनि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। यद्यपी, दीर्घकालीन विकल्पको बाटोमा लागेको बताइरहेको छ।
आन्तरिक उडान तर्फका क्याप्टेनहरुको गैर जिम्मेवारी। जो, विमान उडाउने तालिकामा आफू उपस्थित हुने हस्ताक्षर गर्छन् तर विमान उडाउन जाँदैनन्। त्यो उनीहरुको मनोमानीमा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि निगमले आवश्यक कार्वाही गर्न किन सकिरहेको छैन। यसले निगमलाई कस्तो घाटा लागिरहेको छ ?
नेपाल वायुसेवा निगमका दुई जना क्याप्टेन जहाज हड्तालमा उत्रेका छन्। र, ति क्याप्टेन हुन्, वाई १२ ई जहाजका संजय बादे श्रेष्ठ र नृपेन्द्र भट्टराई।
पछिल्लो समय आन्तरिक उडानतर्फ राम्रो सुरुवात गरेको निगम दुई क्याप्टेनकै कारण फेरी धरासायी बन्ने खतरा बढेको छ। अर्को तर्फ आवश्यक योग्यता नभएका व्यक्तिहरुले त्यही माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिनु निगम, यात्रु र मुलुककै लागि घाटाको कुरा हो। त्यस्तै आफ्नो माग पुरा गराउन बाध्य बनाउने क्याप्टेनले सुरक्षित ढंगबाट जहाज उठाउछन् भने के ग्यारेन्टी? यही बारेमा बुझ्नका लागि हामी नेपाल वायुसेवा निगम पुग्यौं।
हामीले निगमका अपरेशन प्रमुख आरके शेरचनलाई भेट्यौं। अपरेशन प्रमुख शेरचनलाई हामीले क्याप्टेन संजयबादे श्रेष्ठ र नृपेन्द्र भट्टराईले किन जहाज हड्ताल गरेको ? र विवाद के हो? भनेर सोध्यौं। जवाफमा उनले भने जे भैरहेको त्यो ठीक भैरहेको छैन। उनले प्रष्ट पारे कि, क्याप्टेन नृपेन्द्र भट्टराई स्टोल क्याप्टेनमा आएका व्यक्ति हुन्। उनले स्टोलकै विमान उडाउनु पर्छ । क्याप्टेन संजयबादे श्रेष्ठ स्टोल क्याप्टेनमा आएको छैन। नागेन्द्र भट्टराई अहिले एयर बसमा छन्, पहिला केही व्यक्तिले गल्ती गरे होलन् अव त्यो दोहो¥याउनु हुँदैन।
त्यसपछि हामीले उनलाई १५ सय घण्टाको प्रवधान के हो ? भनेर पनि सोध्यौं । जवाफमा उनले भने यो क्षेत्रमा उमेरले मानिस सिनियर र जुनियर हुँदैन । कामले हुने हो । वर्षौं वर्षदेखि निगमका क्याप्टेन भएर बसेका छन्। तर चार पाँच वर्षमा १५ सय घण्टा विमान उडाएको छैन। त्यस्तो क्याप्टनबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने ? निजि क्षेत्रका विमान कम्पनीका क्याप्टेनहरुले चार पाँच वर्षमा ३ हजार ३५ सय घण्टा बिमान उडाउछन्। तर, निगमका क्याप्टेनले जहिले पनि सिनियर भएर बस्ने अरु नयाँ क्याप्टेनहरुलाई मौका नदिने गर्छन् । अब त्यस्तो गर्ने दिन गयो ।
उनले पछिल्लो समय क्याप्टेनहरु विमान उडाउन छोडेर राजनीतिक दलका ढोकामा पुगेर एयर बसमा जानका लागि दवाव दिन लगाएको र त्यस्तो गरेको खण्डमा निगम नै धरासयी हुने चिन्ता पनि ब्यक्त गरे ।
उनी अझै भन्दै थिए, अरु पेशाका मानिस भन्दा यो पेशाका मानिसहरु अत्यन्तै बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने हो । तर, यात्रुलाई नै धोका दिने व्यक्तिलाई के भन्ने ? केही समयमा नै अहिलेको समस्या अन्त हुन्छ।
हो, राजनीतिक आडमा आफुलाई जबर्जस्ती बढुवा गर्नु पर्छ भन्ने क्याप्टेनमाथि कारबाही हुनै पर्छ । उनीहरुको माग साँच्चिकै छ र नियम संगत पनि छ भने त त्यसो भन्नु उनीहरुको पनि अधिकार होला, तर त्यसो होइन र निगम प्रशासन सही वोलिरहेको छ भने यस्ता व्यक्तिको लाइसेन्स नविकरणमा समेत रोक लगाउनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारी तलब, भत्ता र सुविधा घर बसी बसी खाने पल्कीएकाहरुको चेत खुल्छ ।
हुन त नेतृत्वदेखि नै भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको निगममा यसता गतिविधि समान्य होलान् । तर, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा वोकेको एउटा संस्थाको लागि यस्तो हर्कत सुहाउने कुरा होइन । आफूहरु सक्षम हुँदा हुँदै पनि र नियमसंगत रुपमा पाउनु पर्ने काम नपाएको हो भने ब्यव्स्थापनका अधिकारीमाथि कार्वाही गरिनुपर्छ । होइन र क्याप्टेनहरु अनावश्यक बखेडा झिकिरहेका छन्, भने यो कुनै मजाक गर्ने विषय होइन । जसतर्फ ब्यवस्थापन मात्रै होइन, विभागीय मन्त्रालय समेत गम्भीर बन्न सकोस् ।
नोट ः लेखक महतो एभिन्यूज टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।